अवार्ड समारोह सकिए पछि पुगीन प्रियंका, सुरुवातमै बाहिरिइन स्वस्तिमा ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/अवार्ड समारोह सकिए पछि पुगीन प्रियंका, सुरुवातमै बाहिरिइन स्वस्तिमा ?
अवार्ड समारोह सकिए पछि पुगीन प्रियंका, सुरुवातमै बाहिरिइन स्वस्तिमा ?
काठमाडौं – अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का शनिबार आयोजना भएको ‘कामना फिल्म अवार्ड’मा आकर्षक बनेर पुगिन् । शनिबार परेको पानीको समेत प्रवाह नगरि पुगेकी स्वस्तिमा केही समय अवार्ड समारोहमा रहिन् । स्वस्तिमा अवार्ड समारोहका बसिरहँदा कार्यक्रम सुरु भएको केही समय मात्र भएको थियो ।
कार्यक्रम संचालक र स्टेजमा अवार्ड वितरण गर्न पुगेका अतिथीले स्वस्तिमालाई प्रतिक्षा गरे । तर, स्वस्तिमा सो समयमा कार्यक्रममा उपस्थित थिइनन् । स्वस्तिमा छायांकनमा जानुछ भन्दै हिडेकी थिइन् । स्वस्तिमाको अवार्ड निर्देशक दीपाश्री निरौलाले लिएकी थिइन् ।
रोचक कुरा के छ भने, स्वस्तिमा अवार्ड पाउँदा सो समारोहमा उपस्थित थिइनन् । तर, अवार्ड कार्यक्रम सकिएपछि नायिका प्रियंका कार्की भने आइपुगिन्। प्रियंकाले ‘उत्कृष्ट सह–अभिनेत्री’को अवार्ड पाएकी थिइन् । उक्त समयमा भने उनी अवार्ड समारोहमा आइपुगेकी थिइनन् । कार्यक्रम सकिएपछि आएकी प्रियंकालाई आयोजकले अवार्ड हस्तान्तरण गरेको थियो ।
आन्तरिक पर्यटकको रोजाईमा ‘अंधेरी झरना
श्रीमानलाई पिटिक्कै मन नपर्ने श्रीमतीका ७ बानी, तपाईमा पनि छ की ?
कञ्चनपुरमा लोपोन्मुख प्रजातिको अजिंगर फेला